Genesỳ 1 DIEM - Tamin'ny fiandohana, fony Andriamanitra - Bible Search
Genesỳ int Genesỳ 2
Noarîn'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny olombelona
1Tamin'ny fiandohana, fony Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany+2dia tsy nisy endriny sady foana ny tany fa ny haizina no nandrakotra ny lalina, ary ny Fanahin'Andriamanitra+ no nanomba tambonin'ny rano.
3Ary Andriamanitra niteny hoe: «Misia mazava.» Dia nisy mazava+. 4Hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, koa nosarahiny ny mazava sy ny haizina. 5Ny mazava nantsoin'Andriamanitra hoe andro, fa ny haizina kosa nantsoiny hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina; izany no andro voalohany.
6Ary Andriamanitra niteny hoe: «Misia habakabaka mba hampisaraka ny rano ho antonta roa.» 7Dia tanteraka izany. Nataon'Andriamanitra ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ho antonta roa, dia ny rano ambanin'ny habakabaka sy ny rano ambonin'ny habakabaka. 8Ary ny habakabaka nantsoin'Andriamanitra hoe lanitra. Dia nisy hariva ary nisy maraina; izany no andro faharoa.
9Ary Andriamanitra niteny hoe: «Aoka hihandrona amin'ny toerana iray ny rano etỳ ambanin'ny lanitra ka ho hita ny toerana maina!» Dia tanteraka izany. 10Ny toerana maina dia nantsoin'Andriamanitra hoe tany, ary ny rano nihandrona kosa nantsoiny hoe ranomasina; ka hitany fa tsara izany. 11Ary Andriamanitra niteny hoe: «Aoka ny tany ho rakotra zava-maitso: zava-maniry misy voa famafy, hazo fihinam-boa isan-karazany eny ambonin'ny tany izay samy manana ny voany avy!» Dia tanteraka izany. 12Fa ny tany nampitsimoka zava-maitso: zava-maniry misy voa famafy isan-karazany, hazo vokatra voankazo izay misy voany na taolany isan-karazany; ka hitan'Andriamanitra fa tsara izany. 13Dia nisy hariva ary nisy maraina; izany no andro fahatelo.
14Ary Andriamanitra niteny hoe: «Aoka hisy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra mba hampiavaka ny andro sy ny alina sady ho marika hamantarana ny fety mbamin'ny andro sy ny taona! 15Ho fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy mba hanazava ny etỳ ambonin'ny tany.» Dia tanteraka izany. 16Ary Andriamanitra nanao ny loharanom-panazavana roa lehibe: ny lehibe kokoa dia ny masoandro mba hanapaka ny andro, ary ny kely kokoa dia ny volana mba hanapaka ny alina; dia nanao ireo kintana+ ihany koa Izy. 17Napetrak'Andriamanitra teny amin'ny habakabaky ny lanitra ireny mba hanazava ny etỳ ambonin'ny tany 18sy hanapaka ny andro sy ny alina ary hampisaraka ny mazava sy ny haizina. Ka hitan'Andriamanitra fa tsara izany. 19Dia nisy hariva ary nisy maraina; izany no andro fahefatra.
20Ary Andriamanitra niteny hoe: «Aoka ny rano ho feno zava-miaina mihetsiketsika isan-karazany, ary aoka ny vorona hanidintsidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra!» 21Dia noarin'Andriamanitra ireo fanano anaty ranomasina sy ireo zava-miaina rehetra isan-karazany mihetsiketsika sady miriaria ao anaty rano, ary koa ireo voro-manidina isan-karazany. Ka hitan'Andriamanitra fa tsara izany. 22Dia nitsodrano* azy Andriamanitra nanao hoe: «Aoka ireo zava-miaina ao anaty rano hiteraka maro sy hihabetsaka ary hameno ny ranomasina; ary aoka ny voro-manidina hihabetsaka eny ambonin'ny tany!» 23Dia nisy hariva ary nisy maraina; izany no andro fahadimy.
24Ary Andriamanitra niteny hoe: «Aoka ny tany hamoaka zava-miaina isan-karazany: biby fiompy, biby madinika mandady ary bibidia, samy araka ny karazany avy.» Dia tanteraka izany. 25Nataon'Andriamanitra avokoa ny bibidia isan-karazany, ny biby fiompy isan-karazany, ary ny biby madinika isan-karazany mandady amin'ny tany; ka hitan'Andriamanitra fa tsara izany. 26Ary Andriamanitra niteny hoe: «Aoka isika hanao olombelona mitovy endrika amintsika sy manahaka antsika; ary aoka hanjakany ny trondro any an-dranomasina sy ny voro-manidina eny an-danitra, ny biby fiompy sy bibidia rehetra eto an-tany ary koa ny biby madinika rehetra mandady amin'ny tany!»
27Dia nahary ny olombelona mitovy endrika aminy tokoa Andriamanitra; lehilahy sy vehivavy+ no nahariany azy.
28Nitsodrano azy Andriamanitra ka nanao taminy hoe: «Miteraha maro sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany mba hifehy azy. Anjakao ny trondro any an-dranomasina sy ny voro-manidina eny an-danitra ary ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany.» 29Ary hoy koa Izy hoe: «Indro omeko ho anareo eran'ny tany tontolo ny zava-maniry rehetra mamokatra voa, ary ny hazo rehetra mamokatra voankazo: ireny voanjavatra sy voankazo fihinana ireny no ho sakafonareo. 30Ary ny omeko ny ahi-maitso rehetra ho sakafony kosa dia ny biby rehetra eto an-tany sy ny voro-manidina rehetra eny an-danitra ary ny biby madinika rehetra mandady amin'ny tany, izany hoe ny manam-pofonaina rehetra.» Dia tanteraka izany. 31Ary hitan'Andriamanitra fa izay rehetra nataony dia indro tena tsara. Dia nisy hariva ary nisy maraina; izany no andro fahenina.